Dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu xukumay maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu xukumay maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka
Maxkamad ku taalo magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa maalintii shalay bilawday go’aan ka gaarista 9 qof oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya balse haysta dhalashada Mareynkanka, kadib markii lagu helay inay u safri lahaayeen dalka Syria, si ay ugu biiraan kooxda Daacish.
Dacwadaasi loo haysto 9-kaasi qof ee dhalinyaradda ah ayaa la sheegayaa inay soo socotay muddo dhowr sanno ah, waxaana maalintii shalay ay maxkamadaasi xukuntay 3 ka mid ah eedeysanayaashaas.
Seddaxdaan eedeysane oo lagu kala magacaabo C/laahi Yuusuf oo 20 jir ah, C/risaaq Warsame oo 21 jir ah iyo Zakariye C/raxmaan oo 21 jir ah ayaa qirtay dambiga, waxayna balan-qaadeen inay dowladda la shaqeynayaan.
C/laahi Maxamed Yuusuf ayaa la sii daayey, kadib, markii uu dhameystay xukun hal sanno, balse waxaa lagu xukumay 20-sano oo kormeer lagu haynayo dhaq-dhaqaaqiisa.
Sidoo kale, C/risaaq Warsame oo ahaa eedeysana labaad ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya laba sano iyo bar, waxaana lagu soo oogay inuu qorsheynayey inuu marka hore u socdaalo Soomaaliya, kadibna usii gudbo dalka Syria islamarkaana ugu biiro kooxda Daacish.
Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in C/risaaq Warsame muddo 20-sano ee soo socoto kor lagala socon doono, islamarkaana la xadidi doono dhaq dhaqaaqiisa.
Zakariya C/raxmaan oo isna ah eedeysanaha seddaxaad ee ugu xukunka adag ayaa lagu xukumay xabsi 10-sano ah, kadib markii uu qirtay dambiga lagu soo oogay, inkastoo uusan iskaashi ka geysanin baaritaanka FBI-da ee saaxiibadiisa kale ee ku biiri lahaa kooxda Daacish.
Hay’adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da ayaa Zakariye C/raxmaan kasoo qabtay isagoo ka dhoofi raba garoonka diyaaradaha ee JFK International Airport ee magaalada New York, xilli uu doonayey inuu u safro dalka Giriigga, islamarkaana uga sii gudbo dalka Syria, si uu ugu biiro kooxda Daacish.
Dhinaca kale, maxkamadaasi ayaa lagu wadaa in maanta iyo berrito ay xukunno kala duwan ku riddo 6-da kale ee dhalinyaradda Soomaalida ah, kuwaasi oo iyagana lagu soo oogay falal argagixiso iyo inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Syria iyo Ciraaq.